Fandaharam-potoana janoary : mitohy ireo hetsika mahazatra ao amin’ny IFM | NewsMada
Fandaharam-potoana janoary : mitohy ireo hetsika mahazatra ao amin’ny IFM
Par Taratra sur 08/01/2016
Na vao manomboka aza ny taona, efa matevina ny fandaharam-potoana sy ireo ara-kolontsaina sy ara-javakanto etsy amin’ny Institut français de Madagascar (IFM) etsy Analakely. Hisantatra izany ary anisan’ny vaovao lehibe eo amin’ny tontolon’ny asa soratra, ny hivoahan’ny sanganasan’i Michèle Rakotoson, mpanoratra tsy zovina amin’ny maro intsony. “Madame à la campagne” no lohatenin’ity boky ity; asa soratra navoakan’ny trano fanontana Dodo Vole. Hisy ny famelabelaran-kevitra iarahana amin’ny mpanoratra, ny 16 janoary izao. Tafiditra ao anatin’ny “Forum littéraire”, hetsika fanaon’ny IFM ihany koa izany.
Eo amin’ny sehatry ny mozika, hitohy koa ny kaonsertra klasika amin’ny mitataovovonana, iarahan’ny IFM sy ny Madagascar Mozarteum mikarakara, isam-bolana. Hotanterahina ny 20 janoary ny andiany voalohany amin’izany amin’ity taona 2016 ity. Hibahan-toerana amin’izany ny sanganasan’i Mozart, hoentina orkestra an-tsehatra amin’ny alalan’ny zavamaneno misy tady.
Mampiavaka ny IFM koa ny fisian’ny efitra malalaka fandraisana sy fampirantiana tabilao sy kanto amin’ny endriny samihafa. Tanjona ny hanome sehatra ny mpanakanto malagasy ahafahan’izy ireo maneho ny sanganasany sy mifanerasera amin’ny mpankafy. Ho an’ny amin’ity taona vaovao ity, hisantatra izany i Rijasolo, efa fandre matetika sy azo lazaina ho efa nametraka ny soniany eo amin’ny tontolon’ny saripika. “Atsimo”, io no lohatenin’ny fampirantiana saripika, hotontosainy ny 19 janoary hatramin’ny 20 febroary izao.
Ankoatra ny kolontsaina sy ny zavakanto, manome toerana lehibe ho an’ny fampiroboroboana ny fampianarana sy ny siansa ihany koa ny IFM.